Skirt uye bhutsu dzakakwirira, tandem yakakwana munguva yechando | Bezzia
Maria vazquez | 10/01/2022 18:00 | Chii chandinopfeka
Makore akati wandei apfuura muBezzia takatokurudzira iyi tandem inoshanda zvakanaka munguva yechando. Zvadaro kusanganiswa kwe siketi uye bhutsu dzakakwirira Yakanga iri imwe yemaitiro makuru emwaka uye kunyangwe gore rino isu hatigone kuzvitsanangura sezvizvi, ichiri imwe nzira huru.
Bhutsu refu dzinoshanda zvakanyanya gore rino nemhando mbiri dzemasiketi: Mapfupi, marefu-akareba masiketi uye marefu masiketi anogona kutora aya akasiyana makucheka uye mavhoriyamu, sezvaungaona mumifananidzo yatakasarudza kuti ikurudzire iwe.
1 Nezvipfeko zvipfupi
2 Masiketi marefu
Masiketi madiki kana masiketi mapfupi inova sarudzo yekutanga kupfeka iyi tandem yakakurumbira munguva ino yechando. Unogona kubheja masiketi akarukwa emberi yakafuridzirwa nemakore makumi manomwe. Asi zvakare kune mamwe akanyanya kudzikama mune asina kwaakarerekera mavara.
Vasanganise ne poloneck mumatoni asina kwaakarerekera asingabe chitarisiko uye bhutsu dzakakwirira mune dema kana brown. Usakanganwa masokisi, iyo yakawanda yezvisikwa zviri nani. Uye kurwisa kutonhora, kubheja pajasi refu saTiffany, uyo anotaridzika akaita kuti tide.
Pakati pemapendero akareba hapana maitiro akajeka akadaro uye huwandu hwemikana hunowedzera. The masiketi anoputika mumachira emvere dzemakwai ivo vanomiririra yakasarudzika uye inogara yakanakisa imwe nzira. Bet like Zina paskirt in warm tones nejuzi nebhutsu nhema kana uchida kutamba zviri safe.
ari monochrome seti Skirt uye knit sweta ndeimwe nzira huru. Mumakore achangopfuura dzakarukwa rinovira vakawana mukurumbira mukuru, kunyanya ayo akagadzirirwa kutipa nyaradzo huru.
Asi kudzokera kune tandem siketi uye bhutsu dzakakwirira, hatidi kupedzisa tisina kutaura nezve maviri akasiyana zvitarisiko zvakatigonesa 100%: Ellen's, akaumbwa neakawanda siketi nhema uye majasi etaupe-toned nebhutsu dzataigona. classify as zvemazuva ano uye zvine mwero; uye Rocky's, inogadzirwa neanofara patterned siketi, jira rakarukwa rine ruvara rwakafanana uye majombo akasiyana.
Ndeipi yaunoda iwe?
Mifananidzo - @tineandreaa, @lai_tiffany, @zinafashionvibe, @adelinerbr, @audreyrivet, @jennymwalton, @ellenclaesson, @ariviere, @rocky_barnes
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Skirt uye mabhoti akakwirira, kusanganiswa kwakakwana munguva yechando